Afrika, 27 February 2019
Arbaco 27 February 2019
Shirka IGAD oo lagu soo geba gebeeyey Djibouti
Magaalada Djibouti ee xarunta dalka Djibouti waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shirkii 46-aad ee wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay urur gobleedka IGAD.
Buhari oo ku guuleystay doorashadi Nigeria
Madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa ku guuleystay doorashadi Sabtidi ka dhacday dalkaasi, isaga oo Nigeria maamuli doono afarta sano ee soo socota.
Tirinta codadka doorashada Nigeria oo socda
Natiijada Doorashada Nigeria oo Weli La Sugayo
Dadka reer Nigeria ayaa weli sugaya natiijada doorashadii dalkaasi ka dhacday,iyadoo weli ay socoto tirinta codadka doorashado si weyn loogu baratamay.
Madaxweyne Geelle oo Qaabiley Madaxweyne Farmaajo
Madaxweynaha Soomaaliya Madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta madaxtooyada Jabuuti kula kulmay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, kadib booqasho uu ku tagay dalkaas.
Shirkadda Spectrum Geo ee baarista ku sameysay xirmooyinka shidaalka ee Soomaaliya ayaa war ka soo saartay arrinta is qab qabsiga Kenya iyo Soomaaliya.
Caruur Qaliin Wadnaha Loogu Soo Sameeyay Faransiiska oo Jabuuti Lagu Celiyay
Hay’ad Faransiis ah ayaa Jabuuti ku celisay caruur Jabuutiyaan ah oo qaliin dhinaca wadnaha ah Faransiiska loogu soo sameeyay.
Madaxweyne Farmaajo oo Burundi kula kulmay dhiggiisa dalkaasi
War saxaafdeed wadajir ah oo ay soo saareen madaxweynayaasha Somaaliya iyo Burundi ayaa faahfaahin laga bixiyay booqashadii rasmiga ahayd ee madaxweynaha Somaaliya uu ku tagay Burunid, isaga oo marti qaad ka helay madaxweynaha Burundi.
Warkii ugu dambeeyay ee xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya
Waxaa weli taagan xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya kadib markii toddobaadkan ay Kenya ay u sheegtay in uu dalkeeda ka baxo safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) isla markaana ay u yeeratay safiirkeedii Lucas Tumbo.
Doorashada Nigeria oo dib loo dhigay
Dadka reer Nigeria ayaa saakay ku soo toosay war kasoo baxay guddiga doorashada Nigeria oo shacabka loogu sheegay in doorashada madaxtinimada dib loo dhigay ilaa todobaadka danbe.
Shabaab oo Bur-burisey dhismaha Safaricom ee degmada Faafi
Wararka ka imanaya Waqooyi Bari Kenya ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shaabab ay xalay weerar ku qaadeen tuulada Galma-Gala oo ka tirsan dagamada Faafi maamulka Gaarisa